Archive du 20170818
Jadon’ny fitondrana HVM Noroahana tao amin’ny Hotely i Ravalomanana
Voaporofo hatrany fa misy mpitondra jadona sy mpanararao-pahefana eto Madagasikara.
Praiminisitra Solonandrasana Efa manao izay hanesorana azy
Fahafaham-baraka tsy roa aman-tany ho an’ny praiminisitra Mahafaly Solondrasana Olivier sy ny fanjakana Rajaonarimampianina manontolo ny nivoahan’ilay taratasy,
Madagasikara sy Aostralia Hiara-kiasa ny parlemanta
Taorian’ny fifampiresahany tamin’ny filoham-pirenena dia nitsidika ara-pomba fifanajana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Jean Max Rakotomamonjy
Ady amin’ny fanondranana andramena “Afaka mirehareha ny fanjakana”
Nihaona sy nifampiresaka tamin’ireo delegasionina avy amin’ny kongresy Amerikanina notarihin’ny filohan’ny kaomisionina momba ny raharaha ara-pitsarana Bob Goolate ny minisitry ny fiarovam-pirenena Rasolofonirina Béni Xavier,
Centre Manantenasoa Tsara tohana avy amin’ny filoham-pirenena
Mankalaza ny faha-28 taona nijoroany ny Ny Association Akamasoa izay natsangan'i Père Pedro.
Ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra Manome « connexion » maimaim-poana ho an’ireo tsy afaka manao vakansy
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vakansy lehibe isika ankehitriny. Na izany aza anefa dia betsaka amin’ireo ankizy sy tanora no tsy mba afaka mivoaka ny renivohitra,
Didin’ny be sandry hatrany !
Miakatra hatrany ny daozin’ny hetraketraky ny fanjakana kanosa sy tsy misy atokona.
Asan’ny mpampivelona Misedra olana noho ny tsy filaminana
Mahatratra 3.500 isa ireo mpampivelona voasoratra anarana ara-dalàna ao anatin’ny holafitry ny mpampivelona amin’izao fotoana.
Antontanisa tsy mazava Mampiahiahy ny mpamatsy vola
Ezahin’ny eo anivon’ny ivontoerana nasionaly mikirakira ny antontanisa ho vita mialoha ny faran’ny taona ny volavolan-dalàna hoenti-manatsara sy hanavaozana ny antontanisa,
Fiara manararao-pahefana Henjana ny fepetra horaisina
Mampimenomenona ny olona ny fihetsiky ny manampahefana amin’ny fanamparam-pahefana eny an-dalambe.
Zandary any Fitampito Ikalamavony Mitaky 70 tapitrisa ariary
Velon-taraina noho ny afitsoky zandary avy amin’ny paositra Fitampito, distrikanin’Ikalamavony ny mponina sy ny fianakaviana mbola manana omby betsaka ao Betabika, 8 km miala ny renivohitry ny kaominina Fitampito.
Ambodifilao Zazavavy kely iray nisy naka an-keriny
Nitrangana toe-javatra nampalahelo teny Ambodifilao afak’omaly Alarobia hariva.
Rtoa Jenny Dee no masoivoho vaovaon’i Aostralia eto amintsika. Nandritra ny fihaonany tamin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina dia nanambara izy fa manam-piniavana hiara-kiasa amin’i Madagasikara i Aostralia,